July Dream: Labelling
စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက် အတ္ထူပတ္တိမှာ ဆူးတွေပေါက်ခဲ့တယ်လို့ သုံးတာမျိုးကိုလည်း သတိရမိတယ်..
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မကိုက်လို့တော့ စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။ အလကား အချိန်ကုန်ပါတယ်။
လောကကြီးကတော့ ဒီလိုပါပဲ။ ဒါမျိုးတွေ မရိုးနိုင်အောင်ကို ကြုံနေရတာပါပဲ။
ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာ လုပ်ပါ ကိုဂျူလိုင်။
သူတို့လဲ သူတို့အလုပ်ကြီးလို့ ထင်နေတဲ့ ဘေးထိုင် ဘုပြော နဲ့သာ အချိန်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ အထင်သေး၊ ငုံ့ကြည့် လှောင်ပြောင်နေတဲ့ လူတယောက်ကို နောက်တော့ သူတို့ မော့ကြည့် လာရပါလိမ့်မယ်။
အမြဲကြိုးစား မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှ အလကားလူ လူညွန့်တုံး မဖြစ်ဘူး မောင်လေးရေ..
၁။ ဟစ်တလာတော့ မဖြစ်ချင်ပါနဲ့ ။
၂။ သူများက တံဆိပ်ကပ်တာကို မကြိုက်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သူများကို မကပ်မိဖို့ သတိမမေ့ပါနဲ့ ။
၃။ တရုပ်လို့ ပြောခံရတဲ့ခါ ကျေနပ်တဲ့စိတ် မဖြစ်ရတာ
တရုပ်ဖြစ်ချင်းဟာ တရုပ်မဖြစ်ချင်းနဲ့ အခွင့်အရေး မတူလို့ ပါ။
၄။လက်ဘက်ငပိတင် အရောင်ဆိုးတာ မဟုတ်ဘူး လူကိုပါ အရောင်ဆိုး ခွဲခြားတတ်တဲ့ အစိုးရကြောင့်ပါ။
အတွေးလေးကြိုက်တယ်ဗျာ။ ပထမဆူးက ကျွန်တော်လဲ စူးဘူးတယ်။
ဟားဟား ကိုဂျူလိုင်ရေးလိုက်ရင်တော့ တခါထဲ စိတ်ထဲစွဲသွားတယ်
ပိဿလေးနဲ့ ဘေးပစ်တတ်တဲ့ တရုတ်ကြီး ကိုဂျူလိုင်ပဲ
အရင်တုန်းက အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ်၊ ကိုယ့်ကို အကြည့်ခံရတဲ့ မျက်လုံးတွေကိုပါ၊
အခုတော့ အသက်ကလေးလည်း ရလာတော့ အဲဒီလိုကြည့်တတ်တဲ့သူတွေ ဟာ သနားစရာပါလားဆိုတာ သိလာတယ်၊ သူတို့ကမ္ဘာက ကျဉ်းလွန်းလှပါလား လို့ပေါ့။
စူးတွေရှိဖူးတယ် ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲထားတယ်။ သူတို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနှိပ်စက်တော့ဘူးလို့ ခံယူထားတယ်။ ၂ခါနာမှာစိုးလို့ပါ။
အမမှာလဲ ဆူးလေးတွေ ရှိခဲ့တယ်
တတိယ ဆူး ရယ်.. အတူတူ ပဲ
ဒါကြောင့်ပဲ တို့တွေ မောင်နှမ
အင်း လောကကြီးက ဆူးခြုံတောကြီးပါပဲဗျာ
ကိုက မဆူးချင်ပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ကို လာလာ ဆူးချင်ကြတယ်
လူဖြစ်နေသရွေ့တော့ ဒါမျိုးဆူးက ရှိနေဦးမှာပဲမဟုတ်လား..... ဒီလိုမျိုးတံဆိပ်ကပ်ခံရတာကိုက ကိုယ့်ကိုတစ်နည်းတစ်ဖုံ အသိအမှတ်ပြုတာလို့ သဘောထားလိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပါပဲ
မြန်မာပြည်က တရုတ်ကလေး စလုံးတရုတ် လူမျိုးတူသူတွေကြားမှာ ဆူးတွေပျောက်ကာ ပျော်နိုင်ပါစေ။
ချမ်းမြေ့ ပါစေ... :)
ဒီဖြူက ဗိုက်ကလေးပူနေပါလား :P
မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်သားပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း second class citizen လို့ဆက်ဆံခံရတာဘဲ။
တရုတ် ကုလားဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။
တံဆိပ်နဲ့ မကပ်ဘဲ ပီကေနဲ့ ကပ်သွားပါတယ်။
ခံစားချက်ချင်း ထပ်တူမို့ အကို ဘယ်လိုခံစားရမယ် ဆိုတာနားလည်ပါတယ်
မေလေးတို့ လို မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ တရုတ်တွေ လူအခွင့် အရေး အရမ်းဆုံးရှုံးရပါတယ်
သူတို့ မသိတာက အဲဒီ တရုတ်တွေကလဲ မြန်မာပြည် ကြီးကို ချစ်သလို မြန်မာပြည်သူတွေကိုလဲ တိုးတက်စေချင်တဲ့ စေတနာ အပြည့် ရှိပါတယ် ဆိုတာပါဘဲ
let it grow all over your body. Then, count it. The number of thorns will tell you how much experiences you'd got, length of the journey you'd traveled and the depth of the feeling you swallowed over and over again...!
I am sure, it will give youabrand new good thorn which can make your life more and more meaningful! ;)
ps- bo lo tat lunn lo ma hote buu ako yay..! myanmar font error tat pye yay ma ya lo :D :P
ကိုဂျူလိုင်ရယ် တရုတ်ကို တရုတ်လို့ တံဆိပ်ကပ်တာ တော်သေးတယ်ဗျ ကျွန်တော်ကို မဟုတ်ပဲနဲ့ ကုလားလို့ တံဆိပ်လာလာ ကပ်နေတာ မနည်းခွာထားရတယ် :D
တရုတ်ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားစာအုပ်ထဲမှာ မပါပေမယ့် တစ်နည်းတော့ တပ်လို့ရပါတယ်ဗျာ။ တမျိုးခံစားမနေပါနဲ့ ဒီမြေမှာမွေး ဒီမြေမှာကြီးသူတွေ အားလုံး ရွှေလို့ပဲ သမုတ်ကြပါတယ်။ တရုတ်တွေကလည်း ရွှေတရုတ်ပေါ့။ ကုလားဆိုလည်း ရွှေကုလားပေါ့။
အဆိုးထဲက အကောင်းတွေယူတတ်ဖို့ ....
သူများရဲ့ မကောင်းတဲ့စရိုက်ကို ကိုယ်လည်းပဲ သူ့တို့လို မဖြစ်ရအောင် ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးတတ်ကြဖို့ လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်...
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကိုဂျူလိုင်ပြောသလို ဆိုးတဲ့ဘက်ကို ရောက်စေတဲ့ ဆူးတွေနဲ့
စာဖတ်သူအတွက် အတွေးကောင်းကောင်းလေးတွေပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်ပါပဲ။
ဆူးတွေကတော့ ပြောမနေနဲ့ အစ်ကိုရေ .... တစ်ကိုယ်လုံး ဗရပွပဲ .... လူ တွေရဲ့ သဘာဝ ကိုက ကိုယ် ကိုယ်၌က အဖြစ်မရှိဘဲ သူတစ်ပါး ကို မေးငေါ့ချင်ကြတာကိုးလေ .... အဲဒီဆူးတွေ နဲ့ ပဲ ဘဝကို ကျားကန်ပြီး မြင့်မြင့်တက်ကြစို့ ရယ် .... ဟစ်တလာတော့ မဖြစ်တန်ကောင်းပါ ဘူးဗျာ .... :)))
တံဆိပ်မကပ်နဲ့ သီချင်းကို သွားသတိရတယ်။